शितगंगाका मेयरले आफ्नो जन्मदिनमा हस्पिटल मै पुगेर क्यान्सर पिडितलाई गरे आर्थिक सहयोग - Ratopress::रातो प्रेस
विक्रम अचार्य, शितगंगा ।
प्राय गरि समाजमा हिजो आज जन्मदिन फरक फरक कार्यक्रम गरि मनाएको देखिन्छ । कहिले होटल तथा पाटी प्यालेसमा अनावश्यक खर्च गरेर कसैले असहाय ,अपांग ,दुखि गरिब, बिपन्न बर्ग तथा जेष्ठ नागरिक लाई सहयोग गरेर मनाएको नौलो कुरा होइन ।
आज अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिकाका मेयर सामाजिक धार्मिक तथा असहाय ,दुखिका साहारा बन्दै अाउनु भएका उहाँले आफ्नो जन्म दिनको अवसरमा भरतपुर वि.पि. मेमेारियल क्यासर हस्पिटलमा पुगि क्यान्सरको उपचार गराईरहेका शितगंगा वार्ड नं.६ की लुमा पौडेल र वार्ड नं ३ का हरि प्रसाद अधिकारीलाई रू. १० हजार का दरले सहयोग हस्तातरण गर्नु भएकाे छ । यति मात्र नभई मेयर अधिकारीले असाय दुखी असाय विद्यार्थिलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क आफ्नै लगानीमा पढाउने यस अघि नै घोषणा गर्नु भएको थियाे ।
यसै गरी आज कै दिन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङग साला धुर्नुस सुन्तली फान्डेसनको लागि रु. ५ लाखको चेक हस्तातरण गरेको मेयर सूर्य प्रसाद अधिकारीले रातो प्रेसलाई बताउनु भयाे । सो रकम शितगंगा नगरपालिकाको तर्कबाट सहयोग गरिएको उहाँले बताउनु भएकाे छ ।